တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး WildArt ဓာတ်ပုံဆရာ- EYES ပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများ - ONE DAILY MEDIA
ဒါကတော့ “EYES” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် WildArt ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရသူများဖြစ်ပါတယ်။ WildArt Photographer of the Year သည် ထူးခြားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဓာတ်ပုံဆရာများက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဓာတ်ပုံဆရာများကသာ အကဲဖြတ်ကာ ၎င်းတွင် 2021 ခုနှစ် ၏ ပထမ 10 လအတွင်း ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား 10 ခုပါရှိပါတယ် ။
EYES သည် မတ်လအတွင်း ဝင်ခွင့်လက်ခံသည့် WildArt အမျိုးအစားခွဲခြားသူများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဓာတ်ပုံဆရာ Josh Galicki တို့၏ အတွေးအခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဓာတ်ပုံဆရာ Josh Galicki။ Josh သည် မြောက်အမေရိက၏ အထင်ကရ ငှက်ဓာတ်ပုံဆရာများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း အခြားအမျိုးအစား ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို သိပါတယ် ။ WildArt အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဟာ Josh အပါအဝင် လေးစားဖွယ်ဆုရ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဓာတ်ပုံဆရာများ ပါဝင်ပါတယ် ။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရောက်ရှိလာပြီး မတူညီသော ပုံစံများနှင့် အထူးပြုမှုများရှိပါတယ်။
အခြားသော အချက်အလက်နှင့် တင်ပြမှုများအတွက် ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို လေ့လာကြည့်ပါ
You can find more info about WildArt POTY:
(၁) EYES ရွှေတံဆိပ်ဆု – Trai Anfield. United Kingdom. ဆုကြေး : £500
(၂) EYES ငွေတံဆိပ်ဆု – Bianca Blonk. Netherlands. ဆုကြေး : £200
(၃) EYES ငွေတံဆိပ်ဆု – Alessandro Chiezzi. Italy. ဆုကြေး : £100
(၄) Eyes Wild Planet ဓာတ်ပုံမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ၏ ရွေးချယ်မှု – Daniel D’Auria, United States of America
(၅) Eyes Wildart Photographer of the Year တည်ထောင်သူ၏ရွေးချယ်မှု – Łukasz Jabłoński, Poland
(၆) ကြည့်ရှူနှုန်းအများဆုံး – Bernhard Schubert. Austria
(၇) ကြည့်ရှူနှုန်းအများဆုံး– Morgane Monneret, France
(၈) ကြည့်ရှူနှုန်းအများဆုံး-Ripan Biswas, India
(၉) ကြည့်ရှူနှုန်းအများဆုံး – Diana Andersen, Australia
(၁၀) ကြည့်ရှူနှုန်းအများဆုံး– Jeremy Robbins, United Kingdom
(၁၁) ကြည့်ရှူနှုန်းအများဆုံး– Jens Birch, Sweden
(၁၂) Eyes Wildart Young Category Winner – Tamás Koncz-Bisztricz, Hungary